Depiote lasa minisitra : Navoakan’ ny HCC ny anaran’ny mpisolo toerana -
AccueilSongandinaDepiote lasa minisitra : Navoakan’ ny HCC ny anaran’ny mpisolo toerana
Depiote lasa minisitra : Navoakan’ ny HCC ny anaran’ny mpisolo toerana
Mazava ny voalazan’ny lalàm-panorenana fa mitsahatra avy hatrany amin’ny asany maha solombavambahoaka azy ireo depiote izay voatendry ho minisitra, ary miakatra eo amin’ ny lisitra manaraka. Noho izany taorian’ny fanendrena ireo solombavambahoaka miisa dimy izay lasa minisitra anatin’ny governemantan’ny marimaritra iraisana dia navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana omaly ny anaran’ireo izay misolo toerana azy ireo etsy amin’ ny antenimieram-pirenena. Anisan’izany i Velotia avy amin’ ny lisitra Mapar izay depiote an’Ikongo misolo toerana an’ i Razafitsiandraofa Jean Brunel izay voatendry ho minisitry ny Fizahan-tany, Imbinina André depioten’i Mahanoro, lisitra Mapar izay manolo an’i Naharimamy Lucien Irmah izay lasa minisitry ny Mponina, Rasendramiadana Clarisse depioten’ny boriborintany faha-V avy amin’ ny movansa Ravalomanana izay manolo an’i Guy Rivo Randrianarisoa izay lasa minisitry ny Indostria, Rasolofo Andriamora Charming Blise depioten’Ambatofinandrahana izay misolo an’i Razanamahasoa Christine izay lasa minisitry ny Fanajariana ny tany, ary Rakotonjatovo Anto Arilafa izay depioten’i Manjakandriana avy amin’ ny movansa Ravalomanana izay misolo toerana an’i Rahantasoa Lydia Aimée Vololona izay voatendry ho minisitry ny Fampianarana teknika.
Ankilany ihany koa raha jerena hatrany ny fanapahana izay navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana mikasika hatrany ireo solombavambahoaka izay voatendry ho minisitra, ary eo ihany koa ireo minisitra izay tsy anisan’ny voatendry eo amin’ ny toerany intsony nefa solombavambahoaka teo aloha ary tsy nametra-pialana. Anisan’izany ohatra ny minisitry ny Fampiofanana teo aloha Marie Lydia Toto Raharimalala, ny minisitry ny Tontolo iainana teo aloha Johanita Ndahimananjara ary Jean Jacques Rabenirina izay minisitry ny Kolontsaina, izay miverina indray eo amin’ ny toeran’ny maha solombavambahoaka azy taorian’ ny fanapahan’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Matoa moa misy ny fiverenena amin’ ny toeran’ny maha solombavambahoaka ireo minisitra teo aloha ireo, dia miala amin’ ny toerany noho izany ireo mpandimby dia i René Rakotonirina Andriamifalisoa, Samuelson Jean Baptiste Rasolofo ary Ludovic Edmond Andriamarotia. Marihina fa nandritra ny roa taona no naha minisitra ireo olona nodimbiasan’izy ireo, noho izany dia roa taona ihany koa izany no naha depiote ireo olona izay nisolo toerana ireo depiote izay lasa minisitra teo aloha ireo.
Nisy fahasimbany ny paompy mitroka solika mampandeha ny sambo MS Atlantis II, ka nitarika ny fahavoazana ho azy. Teo amin’ny sisin-dranomasin’ny Mahambo, Fénerive Est no nisehoan’izany ny alin’ny talata hifoha alarobia. Vokany, potika tanteraka ny ...Tohiny